Special Report - How Myanmar forces burned, looted and killed inaremote village - Worldnews.com
INN DIN, Myanmar (Reuters) - Bound together, the 10 Rohingya Muslim captives watched their Buddhist neighbors digashallow grave. Soon afterwards, on the morning of Sept. 2, all 10 lay dead. At least two were hacked to death by Buddhist villagers. The rest were
မြန်မာဇာတ်ကား-ဟန်နီနဲ့ကျွန်တော့်ဖေဖေ-ကျော်ရဲအောင်၊ ထွန်းထွန်း၊ သဇင်
Myanmar Idol Season-3(Top-4+1) Performance Show Live Streaming....
Myanmar idol ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို သူတို့ရှေ့မှာ မချီးကျူးဖြစ်ရင်တောင်
Myanmar Idol ဒိုင်တွေနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအပေါ် မျိုးကျော့မြိုင်ရဲ့အမြင်
Myanmar Idol Season-3 ပြိုင်ပွဲဝင် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ ပရိသတ်များနှင့်တွေ့ဆုံခိုက်
Myanmar Idol S3 Top4Phyo Myat Aung
Myanmar Jungle of the Undead (Call of Duty Zombies)
Join the FREE YAW Discord Server, https://discord.gg/XcSPJfH OUR PERSONAL CHANNELS, Meaty - https://www.youtube.com/user/meatwagon22 GUNNS - https://www.youtube.com/channel/UC5IlS8Mf5CQsNwuEL8osp_w OUR LIVE STREAMS, GUNNS - https://www.twitch.tv/brainfreezevids Meaty - https://www.twitch.tv/meatwagon22 OUR OUTDOOR ADVENTURE CHANNEL, https://www.youtube.com/channel/UCy713YpSicEprFZogbZVdMA TWITTER, GUNNS4HIRE - https://twitter.com/GUNNS4HIRE Meatwagon22 - https://twitter.com/meatwagon22...
Myanmar Idol Season-3(Top-4+1) Performance Show Live Streaming.......
Myanmar Idolဒိုင်တွေကဘီလူးဆိုင်းတီးတာရောချိုချိုသာသာပြောတာပါရှိမှာပါပဲဆိုတဲ့အကယ်ဒမီရန်အောင်(ရုပ်သံအစီအစဉ်) ■ Myanmar Idol မှာအကဲဖြတ်ဒိုင်အဖြစ် ပါဝင်နေတဲ့ အကယ်ဒမီရန်အောင်က ဒိုင်တွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘီလူးဆိုင်းတီးတာလည်းရှိသင့်သလို ချိုချိုလေးပြောတဲ့သူကလည်းရှိမှာပါပဲ။ အဓိကတော့ကောင်းစေချင်လို့ပြောတာကြောင့် ဝေဖန်ခံနိုင်ရမယ်လို့ သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။...
Myanmar idol ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို သူတို့ရှေ့မှာ မချီးကျူးဖြစ်ရင်တောင် ကွယ်ရာမှာ အမြဲတမ်းချီးကျူးတယ် ဆိုတဲ့ တေးသံရှင် မျိုးကျော့မြိုင် Myanmar idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့ ဒိုင်တစ်ဦးဖြစ်သူ တေးသံရှင်မျိုးကျော့မြိုင်ဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး သူတို့ရှေ့မှာမချီးကျူးဖြစ်ရင်တောင် ကွယ်ရာမှာတော့ အမြဲတမ်းချီးကျူးပြီး သူတို့ရဲ့ သီချင်းအပေါ်မှာ အရှိကိုအရှိ အတိုင်း ဖြူဖြူစင်စင်သီဆိုတာတွေကိုချစ်ရတယ်လို့ တေးသံရှင်မျိုးကျော့မြိုင်ကဆိုပါတယ်။...
\_"Judge တစ်ယောက်အနေနဲ့ ခံယူချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ စကားတွေပြောကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရွေးလာခဲ့တုန်းက အကုန်လုံးက တူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဘက်ပိုင်းမှာကျတော့ နည်းနည်းလေး အမြင်မတူတာလေးတွေ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်\_" လို့ Myanmar Idol နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောလာတဲ့ မျိုးကျော့မြိုင်...
သူရဲ့ အသံ ချိုချိုလေးနဲ့ ပင်ကိုယ် အနုပညာကို သဘောကျတယ် လို့ဆိုလိုက်တဲ့ Myanmar Idol Season-3 ပြိုင်ပွဲဝင် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ ပရိသတ်များနှင့်တွေ့ဆုံခိုက်...
Join the FREE YAW Discord Server, https://discord.gg/XcSPJfH OUR PERSONAL CHANNELS, Meaty - https://www.youtube.com/user/meatwagon22 GUNNS - https://www.youtube.com/channel/UC5IlS8Mf5CQsNwuEL8osp_w OUR LIVE STREAMS, GUNNS - https://www.twitch.tv/brainfreezevids Meaty - https://www.twitch.tv/meat
Myanmar Idolဒိုင်တွေကဘီလူးဆိုင်းတီးတာရောချိုချိုသာသာပြောတာပါရှိမှာပါပဲဆိုတဲ့အကယ်ဒမီရန်အောင်(ရုပ်သံအစီအစဉ်) ■ Myanmar Idol မှာအကဲဖြတ်ဒိုင်အဖြစ် ပါဝင်နေတဲ့ အကယ်ဒမီရန်အောင်က ဒိုင်တွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘီလူးဆိုင်းတီးတာလည်းရှိသင့်သလို ချိုချိုလေးပြောတဲ့သူကလည်းရှိမှာပါပဲ။ အဓိကတော့ကောင်းစေချင်လ
Myanmar idol ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို သူတို့ရှေ့မှာ မချီးကျူးဖြစ်ရင်တောင် ကွယ်ရာမှာ အမြဲတမ်းချီးကျူးတယ် ဆိုတဲ့ တေးသံရှင် မျိုးကျော့မြိုင် Myanmar idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့ ဒိုင်တစ်ဦးဖြစ်သူ တေးသံရှင်မျိုးကျော့မြိုင်ဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး သူတို့ရှေ့မှာမချီးကျူးဖြစ်ရင်တောင် ကွယ်ရာမှာတော့ အမြဲတမ်
\_"Judge တစ်ယောက်အနေနဲ့ ခံယူချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ စကားတွေပြောကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရွေးလာခဲ့တုန်းက အကုန်လုံးက တူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဘက်ပိုင်းမှာကျတော့ နည်းနည်းလေး အမြင်မတူတာလေးတွေ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်\_" လို့ Myanmar Idol နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောလာတဲ့ မျိုးကျော့မြိုင်
သူရဲ့ အသံ ချိုချိုလေးနဲ့ ပင်ကိုယ် အနုပညာကို သဘောကျတယ် လို့ဆိုလိုက်တဲ့ Myanmar Idol Season-3 ပြိုင်ပွဲဝင် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ ပရိသတ်များနှင့်တွေ့ဆုံခိုက်